Somalia:Mahiiga oo ka hadlay is waafajinta muddo kordhintii Baarlamaanka iyo talooyinka Shirka Nayroobi – Wareysi Qeybtii 2aad | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Augustine P. Mahiga, SOMALI NEWS, TFG Somalia, UN & ORG (Somalia), WARARKA	> Somalia:Mahiiga oo ka hadlay is waafajinta muddo kordhintii Baarlamaanka iyo talooyinka Shirka Nayroobi – Wareysi Qeybtii 2aad
Somalia:Mahiiga oo ka hadlay is waafajinta muddo kordhintii Baarlamaanka iyo talooyinka Shirka Nayroobi – Wareysi Qeybtii 2aad
Waa Qeybtii 2aad ee wareysigii Raadiyo Muqdisho uu la yeeshay Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Mahiiga.
Wareysiga qeybta labaad wuxuu u dhacay sidan:
Radio Muqdisho: Danjire, qodobada ka soo baxay shirka Nayroobi waxaa ka mid ahaa in Baarlamaanka loo kordhiyo muddo laba sano ah, horayna Baarlamaanku wuxuu waqtigiisa ku kordhiyay muddo 3 sano ah. miyeysan taasi u muuqan inay ka soo horjeeddo rabitaanka Baarlamaanka?
Danjire Mahiiga: Xildhibaannadu waa joogeen halkaas, oo waxaa ka joogay wakiillo ka socday, waxaana jiray wada-tashiyo lala yeeshay maamullada gobollada, waxaana filayaa inay tani ahayd wax ka soo baxay wada-xaajoodkii ay yeesheen.
Waxyaabaha ku soo baxay war-murtiyeedkii aan soo saarnay waxay ahaayeen wixii ka soo baxay wada-xaajoodkoodii dhex maray labada dhinac oo kala ahaa xildhibaannada oo dhinac ah iyo Puntland, GalMudug iyo Ahlu Sunnah oo isku dhinac ah. Waxayna wada-xaajoodka yeesheen iyadoo aysan meesha joogin Beesha Caalamka. Xitaa anigoo shirka guddoominayay maanan joogin meesha. Waxyaabihii aan akhriyay waxay ahaayeen wixii laysku raacay in la soo jeediyo.
Waxaan hoosta ka xarriiqayaa inay arrintani tahay talooyin, balse ma ahayn go’aamo.
Radio Muqdisho: Shirkiinu wuxuu khilaaf ka dhex abuuray Hay’adaha KMG ah iyo Ahlu Sunnah mid kasta dhexdiisa. Haddaba miyaan la oran karin shirkiinu wuxuu khilaaf dhex dhigay hay’adihii horay u jiray?
Danjire Mahiiga: Runtii wuxuu ahaa shir wanaagsan. Waxaan filayaa in Ahlu Sunnah ay waxqabad wanaagsan ka muujineysay muddooyinkan dhinaca furumaha dagaalka, haatana ay la shaqeynayaan Xukuumadda KMG ah, waxaana taageerayaa wada-shaqeyntaas. Weliba inaan Beesha Caalamka u muujino in dhammaan dhinacyada furumaha kaga soo horjeeda kooxaha xag-jirka ah waa in la taageero.
Waxaa Wareystay: C/casiis Afrika.
Wareysiga qeybta laad
Tags: Government, Interviews, Muqdisho, POLITICS, SOCIETY, Transitional Federal Government, un somalia, Wareysi, WORLD
Somalia:R/wasaare Farmaajo oo sagootiyay gabdhaha kubadda kulayga ee Muqdisho city – SAWIRRO Somalia:Dilalal is daba joog ah oo ka dhacay Gaalkacyo & Ciidamada ammaanka ee Puntland oo dad ku qab qabtay